प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि माधव नेपालले उठाए गम्भीर ४ प्रश्न | सु-सुचित नेपालको चित्र
प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि माधव नेपालले उठाए गम्भीर ४ प्रश्न
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भिर ४ प्रश्न उठाएका छन् ।
‘हाम्रो काम र व्यवहारले नै जनताको मन जित्न सक्दछ । जनताका पीर, मर्कामा सहयोगी भयौ भने जनताको दुःख कष्टमा साथ दियौ भने अनि जनताको सुखमा पनि रमायौ भने अनि जनताले हामीलाई मन पराउनेछन् । नभए त्यतिकै जनताले मन पराउँछन् भनेर त्यसको ग्यारेण्टी गरेर बस्न सक्दैनौ ।
ख्याल गर्नुहोस् । यसअर्थमा पनि जनताका समस्याहरु के हुन् ? जनताका चाहानाहरु के हुन् ? जनता के भनिरहेका छन् ? त्यो सुन्नुहोस् । म जोड दिन चाहन्छु । हाम्रो बानी के भएको छ भने धेरै बोल्ने । सुन्ने कम ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार जनताले विश्वास गरेर पठाएको दुई तिहाइको जननिर्वाचित सरकार भनिरहँदा नेता नेपालले उनको भनाईलाई यसरी खण्डन गरेका छन् ।
–उनले भनेका छन्, ‘प्रगति यथेष्ट छैन । अझै पनि हामीले ५५ प्रतिशत जनताको मात्रै मत प्राप्त गरेका छौ । ख्याल गर्नुहोस्, दुई तिहाई होइन । धेरै जनताको विश्वास जित्न बाँकी छ । धेरै जनताको माझमा पुग्न बाँकी छ । धेरैलाई हामीले आफ्नो पक्षमा ल्याउनु जरुरी छ । त्यो के बाट गर्न सक्छौ रु राम्रो कामबाट ।’
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा पार्टी विधि र पद्धतिमा चलिरहेको दावी गरिरहँदा नेता नेपाललाई त्यो कुरा पनि मन परेन । र उनले यसमा पनि गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको दावी गरिरहँदा नेता नेपालले त्यसमा पनि गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् ।
–‘हामीले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि भनेका छौँ । समृद्धि भनेको मुठ्ठी भरका जमातका लागि होइन, आम नागरिकको लागि हो । त्यसको निम्ति शिक्षाका सवालमा हो । रोजगारीको सवालमा हो । स्वास्थ्यका सावलमा हो । जनतासँग जोडिएको गाँस बास कपासमा हो । जनताका पिर मर्का बुझ्नुपर्छ ।
अहिले समाजमा कस्ता कस्ता विकृतिहरु छन् रु सामाजिक, सांस्कृतिक अनेकौ किसिमका विकृतिहरुमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । यी सवै कुराको लागि मुख्य दृष्टिकोण के हो भन्ने हुन्छ । माक्र्सवादको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन गर्ने वानी छुट्यो । त्यो तपाईहरुले विचार गर्नुस् । पढ्दै नपढ्ने, अध्ययननै नगर्ने । सिद्दान्तको विचारको पक्षलाई वास्ता नगर्ने । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’